Istaraatiijiyadda Dijitaalka & Maareynta - Kooxda Istaraatiijiyada Lincoln
Istaraatiijiyadda Dijital ah &
Udoodista Dijitaalka ah & Xayeysiinta khadka tooska ah
Waa muhiim inaad bartilmaameedsato dhagaystayaasha aad rabto oo leh heer sare oo tayo & soo noqnoqod leh oo ku teedsan aalado badan oo leh fiidiyowyo dhijitaal ah, xayeysiis raadin, xayeysiisyo banner iyo xayeysiisyada warbaahinta bulshada.
Ku qancin & soo noqnoqosho si loo gaadho dhagaystayaasha la beegsaday dhowr jeer. Waxaa muhiim ah in la bartilmaameedsado dhagaystayaasha aad rabto heer sare oo soo noqnoqod leh oo ku baahsan aalado badan oo leh fiidiyowyo dijitaal ah, xayeysiis raadin, xayeysiisyo banner iyo xayeysiisyada warbaahinta bulshada.
Xayeysiisyada YouTube-ka & Kuwa Dheeraadka ahba
Qaadashada farriinta hal-abuurka ah iyo la-xiriiridda xargaha-gooyayaasha & isticmaaleyaasha fiidiyowga ee internetka culus.
Qaadashada Email & Cusbooneysiinta
Soosaarida liisas badan oo emayl ah marxaladaha hore si loo dhiso hawlgelinta khadka tooska ah. Cusbooneysiinta joogtada ah ee sanduuqyada taageerayaashaada ayaa kaxeyn doonta kaqeybgalka & fariinta.
Fursadaha Warbaahinta Bulshada
Dhisida kuwa raacsan Facebook, Twitter & Instagram si loo dhiso dhagaystayaal aasaasi ah oo ay kuwada xiriiraan kuna faafiyaan fariintaada. Warbaahinta bulshada waxaa loo isticmaali karaa in lagu helo taageerayaal hore oo lagu dhiso kaqeybgal toos ah iyada oo loo marayo dhacdooyinka Facebook Live, dhajinta soo noqnoqda, Snapchats, fariimaha Instagram & waxqabadyo maalinle ah.
Dhamaan naqshadeena ayaa waxaa ka mid ah keywords iyo nambarro si aan u helno nambar ku-gal.
Naqshad Casri ah: Websaydhkaaga waxaa lagu horumarin doonaa iyadoo la adeegsanayo nashqadeyn nadiif ah, iyadoo la adeegsanayo daaqadda buuxda ee daaqadda biraawsarka. Sawirro ballaaran, sawir adag oo ay weheliso isku-darka font wax ku ool ah ayaa muujin doona saameynta dijitaalka ah ee buuxda.
Khibradda Mobilada: Waxaan fileynaa in inta ugu badan boqolkiiba 60% dadka soo booqda ay ka imaan doonaan aaladda mobilada. Annaga oo taas maskaxda ku hayna, waxaan adeegsan doonnaa lambarka jawaab-celinta si aan u cabbirno websaydhka shaashadda kasta.
Wicitaanada Waxqabadka: Websaydh kasta, waa muhiim in la siiyo qalab adag oo loogu talagalay kaqeybgalka martida. Qalabyada sida codsiyada khadka tooska ah lagu qoro, emailka isdiiwaangelinta, foomamka deeqda, iyo sahannada iskaa wax u qabso ayaa fure u ah cabbirka guusha barnaamijkaaga dhijitaalka ah.
Astaanta & sumadda: Ololahaagu wuxuu u baahan yahay astaan ​​iyo summad gudbisa farriinta muhiimka ah - laakiin sidoo kale waa wax fudud & xusuus.
Maareynta Warbaahinta Bulshada
Hadafka dadaal kasta oo warbaahinta bulshada ah waa in la abuuro beel weyn oo dhab ah oo taageerayaal ah oo dareemaya inay si toos ah adiga kaaga maqlayaan.
Kooxdayada dijitaalka ah ee heeganka leh waxay bixin doonaan la talin istiraatiiji ah, naqshad naqshadeyn iyo horumarin, dhajin, la socosho warbaahinta bulshada iyo dhageysiga.
Istaraatiijiyadda nuxurka ayaan ahayn in si fudud lagu dhejiyo shan garaaf isbuucii. Taabadalkeed, waxaan eegnaa sida aan ula xiriiri karno taageerayaashaada oo aan uga hawlgelin karno si joogto ah.
Maareynta Sumcadda Khadka Tooska ah & Nadiifinta Mashiinka Raadinta
Haddii aadan ku jirin bogga koowaad ee natiijooyinka mashiinka raadinta, kuma guuleysatid badhanka SEO - waxaad u oggolaanaysaa dadka kale inay soo sheegaan astaantaada.
Daraasad dhowaan la sameeyay waxay muujineysaa in seddexda meelood ee darajooyinka raadinta baaritaanka dabiiciga ah ay ka dhaceysaa ku dhawaad ​​40% dhamaan raadinta, halka ilaa 30% dhammaan natiijooyinka ku yaal Bogga 1 iyo 2 aan gabi ahaanba la dhajin.
Kooxdayada isgaarsiinta dijitaalka & isgaarsiinta ayaa kuu sheegi kara sheekadaada dhijitaalka ah isla markaana wararkaaga wanaagsan ku riixaya bogga ugu horreeya iyagoo adeegsanaya xeelado sare oo SEO & ORM ah.
Dijitaalka Dijitaalka ah
Jaangooyooyinku waxay noo oggolaanayaan inaan si qotodheer u bartilmaameedsadaan shakhsiyaadka gala goobaha horay loo cayimay.
Xayeysiintaada dhijitaalka ah ayaa la arki doonaa markay furayaan boggooda internetka ama akoonnada warbaahinta bulshada.
Dadka jecel “ololaha” ololaha warbaahinta bulshada waxay sii wadi doonaan inay helaan wax u cusboonaysiin jir ahaan ah (maahan hawlgelin la bixiyay).
Teknolojiyadani waxay ka shaqeysaa labadaba mobilada mobilada iyo desktop-ka, sidaa darteed haddii aad dooneysid inaad bartilmaameedsato garoon lagu ciyaaro munaasabad isboorti ama xafiiska siyaasiga, waxaa laguu xaqiijin karaa in farriintaada ay tahay mid aan lagaranayn.
KHUDBADII SHAQADA AADANAHA